Daawo:- Darawalkii Wasiir Ka Tursan Mamulka Garoowe Oo Gadhigigu Waday La Baxsaday Mushahar La'aan Awadeed
Daawo:- Darawalkii Wasiir Ka Tursan Mamulka Garoowe Oo Gadhigigu Waday La Baxsaday Mushahar La’aan Awadeed
Caafimaadka Ciyaaraha Fikradaha Muqaalo taariikh Wararka Wikileaks May 16, 2017
Garoowe(Allssc): Darawalkii Wasiir K/xigeenka Haweenka iyo arrimaha Qoyska Mamulka Garoowe ayaa waxaa uu la baxsaday Gadhigii wasiirada.
Wasiirad Farxiyo Yuusuf Xirsi ayaa Darawalkeedii kala baxsaday Gadhigii Wasarada waxana uu damcay in uu ka iibiyo Koonfurta magaalada Gaalkacyo. Mamulka Galmudug oo wasirada ay ergo beeleed iyo Cuqaal u dirsatay ayaa Mamulka Galmudug Qabteen Darawalkii Wasirada oo ay isku beel kasoo jeedaan.
Ugu Danbayn Darawalka ayaa loo mag dhaway Dhaqalihii ka maqnaa oo mudo 2 sano ah oo uusanw ax mushahar ah uusan ka qadan Mamulka Garowe iyo wasiiradaba.
Iskusoowa da duuboo waxaa hore Darawalada iyo ilaalda ay gawadhi ugala baxsadeen Wasiiro tiro badan iyo M/weyne K/xigeenka C/wali Gaas kaas oo ilaladisa iyo darawalintiisa ay 2 goor kala baxsadeen Gawadhida Gashan oo ilalinta u ahaa iyo Gadhi khaaska ah ee uu ku soon jiray Bulbul Camey.
Tagged featuredwararkawararkii ugud anbeeyay